एकोहोरो चिच्याहट – Dev Neupane
November 13, 2010 April 8, 2015 devneupane Stream of Consciousness
एकोहोरो चिच्याहट आइरहेको छ लगातार !
५ मिनेट सम्मको त्यो लगातार चिच्याहटको अन्तिम १० सेकेण्ड सँग कोही भर्‍याङ चढेको आवाज पनि मिसिन्छ । जोडले बन्द गरेको सानो झ्यालको आवाजसंगै सबै आवाजहरु हराउछन र एकैछिनमा ढोकामा लगाएको ताल्चा खोलिन्छ । जब ढोका खोलिन्छ भित्र एक प्रकारको बेग्लै अँध्यारो बातावरण देखिन्छ । लाग्छ यो कोठा वर्षौ देखी बन्द थियो र आज मात्र खोलिएकोछ ।
“कत्ति कराउन सक्नुहुन्छ ! एकैछिन पनि चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्न ?” एउटी युवतिको यो आवाजसंगै झ्यालमा लगाइएको अर्को तल्चा पनि खुल्छ । “आफ्नो काम-धन्दा केही गर्न भ्याएको छैन – कस्लाई के धन्दा घरज्वाँईलाई खानको धन्दा भनेको यहि हो । ल ।” भन्दै ति युवती बाहिर निस्कन्छे र ढोकाको ताल्चा लगाएर जान्छे ।
त्यो अँध्यारो कोठाको एउटा कुनामा एउटी ७० बर्षे बुढी आइमाइ एकोहोरो झ्यालबाट आएको उज्यालोलाई हेरिरहेकी हुन्छे । जब भर्‍याङ बाट युवतिको पैतलाको आवाज हराउछ अनी ति बुढी आइमाइ हतारिदै झ्यालमा आउछे र बाहिरी संसारमा आफ्ना आँखा दौडौन थालछे ।
Art Source : http://fineartamerica.com
बाहिर घाम लागिरहेकोछ, मानिसहरुको चहल-पहल पनि निकै बढिसकेको छ । घामको न्यानोपन आफ्नो शरीरमा पारेर उनी बाहिरी संसार हेर्दैछिन । उनको अनुहारमा प्रशस्त खुशीका भावहरु देखिन्छन । लाग्छ उनले आज विश्व बिजय गरेकि छिन । तर अहिले सम्म उनको बोली फुटेको छैन । केहीछिन अगाडि सम्मको उनको चिच्याहट अहिले शान्त भावमा परिवर्तन भैसकेको छ ।
एकटक सँग आफ्नो आँखा बन्द नगरिकन १०-१५ मिनेट जति एकोहोरो बाहिर हेरिरहेकिछिन । बाटोमा हिंड्ने मानिसहरुले उनको यो अनुहार हेरेर भन्न सक्दैनन कि उनी विगत ६० बर्ष देखी त्यो झ्यालमा यसैगरी बसिरहेकीछिन भनेर ।
तिमी हुँदा सम्झना सबै थिए ।
सबै अंक पढि नसकी, कुरा के हो थाहा पाउन नसकिने रहेछ, अर्को अंक चाँडै लेख्नुस है !
यो article पढ्दा मलाई बर्माकी नेत्री आङ साङ सुकी आज नजरबन्द मुक्त भएको सम्झना भयो। के यसमा कुनै संयोग छ ?? एउटा उत्सुकता ।
मलाई पनि आङ् साङ् सुकै कै कुरा याद आयो…
launa chado padhna pauna yasko baki ansha pani….
tehi ta arko anka na rakhe samma ali clear nahune rayecha.
Dev ji चौथो अन्तराष्ट्रिय नेपाली ब्लगर भेला माघ २२,२०६७-१० बजे शनिबार बिहान(Feb 5,10AM NST) हुंदैछ भेलाको समय दौंतरी ब्लगमा http://www.dautari.org पाल्नूहोला.